कोरोना महामारीकाबीच राष्ट्रपतिले गरिन संसद भंग भएको घोषणा, के हो खास कारण ? — Imandarmedia.com
कोरोना महामारीकाबीच राष्ट्रपतिले गरिन संसद भंग भएको घोषणा, के हो खास कारण ?
कोरोना महामारीबीच सिंगापुरको संसद् विघटन भएको छ । मंगलबार सिंगापुरकी राष्ट्रपति हालिमा याकुबले प्रधानमन्त्री ली सेन लूङको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेकी हुन् ।
सिंगापुरको सत्तारुढ पिपल्स एक्सन पार्टी(पीएपी) सन् १९५९ देखि सरकारको नेतृत्वमा छ । उक्त पार्टीले सन् १९६५ मा सिंगापुर स्वतन्त्र हुनुपूर्वदेखि नै त्यहाँको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसअघि सन् २०१५ मा भएको आम चुनावमा पीएपीले ८९ मध्ये ८३ सिटमा जित हात पारेको थियो ।
यस पटक भने चुनावी क्षेत्र निर्धारण पुनरावलोकन समितिको सिफारिअनुसार संसदीय क्षेत्र बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस पटक संसदीय चुनावी क्षेत्र ८९ बाट बढाएर ९३ पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ) का अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर अहिलेसम्मकै बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । डब्लूएचओका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर एक लाख ८३ हजार जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ब्राजिलमा ५४ हजार ७ सय ७१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।